Madaxwaynaha Soomaaliya oo ka hadlay duqamaymaha Mareykanka – Radio Daljir
Febraayo 9, 2018 8:04 b 0
Madaxwaynaha dowladad faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabulaahi Farmaajo oo sanad jirsaday xafiiskiisa madaxwayne ee uu joogo ayaa ka hadlay duqaymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya iyo ciidamada Imaaraatka uu tababaro ee ku jira xerro ku taala magaalada Muqdisho.
Madaxwaynaha ayaa sheegay inuu soo dhowynayo duqaymaha Mareykanka uu fuliyo, islamar ahaantaana lasii laba jibaari doono.
Waxaa uu sheegay Al-shabaab kaliya inaan looga adkaan karin dagalaada dhulka ee laga beegsan doono xagga cirka ah, isagoona intaasi ku daray saraakiisha Mareykanka inuu kala hadlay in kaliya la duqeeyo saldhigyada Al-shabaab si looga ilaaliyo shacabka khasaaraha soo gaaraya.
Dhanka ciidamada Imaaraatka uu tababaro ee ku sugan xero kutaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu ku sheegay inay yihiin ciidamo dowladda ay leedahay, waxaana uu xusay inay ka qaybqaadan doonaan howlagalada ka dhanka ah Al-shabaab.
Ciidamada Imaaraatka uu tababaro ayaa lagu eedeeyey inay qaadaan howlgallo ay dowladda ay waxba ka ogayn oo ay ku beegsadaan siyaasiyiinta qaarkood, taasi oo wax badan la iska waydiinayo.